नयाँ इन्जिन र कलरमा यामाहा आर-१५ भी थ्री, नेपाल आउँदा मूल्य कति पर्ला ? – Khabarhouse
नयाँ इन्जिन र कलरमा यामाहा आर-१५ भी थ्री, नेपाल आउँदा मूल्य कति पर्ला ?
Khabar house | २९ पुष २०७६, मंगलवार ०३:२४ | Comments
काठमाडौं : यामाहाले आफ्नो चर्चित मोडल आर-१५ भी थ्रीको २०२० मोडलमा केही परिमार्जन गरेको छ । कम्पनीले केही समय अगाडि नयाँ बीएस ६ इन्जिनको साथ यसको २०२० मोडल सार्वजनिक गरेको थियो। अब भने कम्पनीले यस लाई भारतीय डिलर नेटवर्कमा प्लेसमेन्ट गरेसँगै यसको कस्मेटिक परिमार्जन सहितको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यसमा कम्पनीले नयाँ कलर भेरियन्ट थप गरेको देखिएको छ । कम्पनीले यसलाई तीन कलर अप्सन रेसिङ व्ल्यू, थन्डर ग्रे र डर्क नाइट कलरमा ल्याएको छ । यी तीन वटै कलरको मूल्यमा केही फरकसमेत गरिएको यामाहाले जनाएको छ। यसमा सबैभन्दा कम मूल्य व्ल्यू कलरको छ भने डार्क नाइट कलर भेरियन्ट सबैभन्दा महंगो रहेको छ । कम्पनीले थन्डर ग्रे र डार्क नाइटमा व्ल्याक अलोय ह्वील दिएको छ ।
कम्पनीले नयाँ इन्जिनको कारण मोटरसाइकलको मूल्य करिब ४ देखि ५ हजार भारु सम्म वृद्धि गरेको जनाएको छ । यदि बीएस ६ मोडल तत्काल नेपाल आउने हो भने करिब २० हजार रुपैयाँ मूल्य बढ्ने छ । नयाँ इन्जिनमा मोन्स्टर मोटोजिपी एडिसन भने बना एको छैन । कम्पनीले यसमा १५५ सीसी सिंगल सिलिण्डर, लिक्विडकुल्ड, एसओएचसी इन्जिन दिएको छ ।
उक्त इन्जिनले १० हजार आरपीएममा १८.६ पीएस पावर र ८५०० आरपीएममा १४.१ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । जुन बीएस ६ इन्जिनको तुलनामा केही कम हो । यस बाहेक कम्पनीले यसको हार्डवयरमा कुनै परिमार्जन गरेको छैन । डियुल च्यानल एबीएस सहित बजारमा उपलब्ध रहेको यो मोटरसाइकल नेपाली बजारमा पनि निकै सफल मोडलमा पर्छ ।